လိဒ်စ်ယူနိုက်တက်နဲ့ ရာသီစပွဲစဥ်မှာ ဆိုးလ်ရှား အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကစားကွက်၊ လူစာရင်း နဲ့ ဗာရိန်း၊ဆန်ချိုတို့ပါဝင်ကစားနိုင်မလား??? – Sport Gaber
လိဒ်စ်ယူနိုက်တက်နဲ့ ရာသီစပွဲစဥ်မှာ ဆိုးလ်ရှား အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကစားကွက်၊ လူစာရင်း နဲ့ ဗာရိန်း၊ဆန်ချိုတို့ပါဝင်ကစားနိုင်မလား???
နောက် ၅ ရက် အကြာမှာတော့ 2021 – 22 ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံး ရာသီ စတင်ပါတော့မယ် ။ အဲ့ဒီမှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ရာသီ အဖွင့်ပွဲစဥ် အဖြစ် လိဒ်စ် ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ ယှဥ်ပြိုင် ကစားသွားရဖို့ ရှိနေပါတယ် ။
အခုထိတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ရာသီကြို ပွဲစဥ်တွေမှာ လူငယ်ကစားသမား အများစုကိုသာ အသုံးပြုထားခဲ့ပြီး အဲဗာတန် နဲ့ ပွဲစဥ်မှာသာ စီနီယာ ကစားသမားတွေကို အသင်းလိုက် ပွဲထွက် ကစားစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တို့ဟာ နွေစျေးကွက်ထဲ ဒေါ့မွန် အသင်းမှ ဂျေဒန် ဆန်ချိုကို ပေါင် 73 သန်းနဲ့ ခေါ်ယူထားခဲ့ပြီး ရီးယဲမက်ဒရစ် အသင်းမှ ရာဖေးလ် ဗာရန်းကို ပေါင် 43 သန်း + အပိုဆုကြေး နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ သဘော တူညီမှု ရရှိထားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့ကြောင့် အသင်းရဲ့ ကစားသမား အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ အတူ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား အနေနဲ့ ခြားနားတဲ့ အရာတွေကို လုပ်ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ ။ အခုတော့ လိဒ်စ် နဲ့ ပွဲစဥ် မတိုင်မီ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရမယ့် ပြသနာ4ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်တို့ အဲဗာတန် နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ခြေစမ်းပွဲတုန်းက ပထမပိုင်းမှာ ဆိုးလ်ရှားဟာ4–3–3ကစားကွက်ကို ခင်းကျင်းခဲ့ပြီး ကစားသမားတွေလည်း အံဝင်စွာ ကစားပေး နိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီကစားကွက်မှာတော့ ဆိုးလ်ရှားဟာ ယခင်လို ကွင်းလယ် ခံစစ်လူ နှစ်ဦး မထားပဲ မာတစ် တစ်ဦးထဲကို ခံစစ် ကစားစေခဲ့ပါတယ် ။
ဒါ့ကြောင့် အဆိုပါ ကစားကွက်မှာ ဗန်ဒီ ဘိခ်ဟာ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် နဲ့ အတူ စိတ်ကြိုက် တိုက်စစ်ဆင် ကစားခွင့် ရရှိသွားခဲ့ပါတယ် ။ ထို့အတူ ယူနိုက်တက်လည်း ပထမပိုင်းမှာပဲ3ဂိုး အထိ သွင်းယူ သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီလို အချိန်မှာ အဲဗာတန် အသင်းလည်း ယူနိုက်တက်ဖက်ကို တိုက်စစ်ဆင် ကစားရ ခက်ခဲခဲ့ရ ပါတယ် ။
လိဒ်စ် နဲ့ ကစားရမယ့် ရာသီအဖွင့်ပွဲမှာ ဆိုးလ်ရှားဟာ ဒီကစားကွက်ကိုပဲ ထပ်မံ အသုံးပြုသွားမလား ဒါမှမဟုတ် ခံစစ်ပိုင်း လုံခြုံစေဖို့ အတွက် အရင်လို ကွင်းလယ် ခံစစ် နှစ်ဦး ထားပြီး ကစားစေမလားဆိုတာ ဖြေရှင်းသွားရပါလိမ့်မယ် ။ ဆိုးလ်ရှား တိုက်စစ်ဆင်မလား ၊ ခံစစ်လုံစေမလား ?
(2) ဗန်ဒီ ဘိခ် or ပေါ့ဂ်ဘာ ?
အကယ်လို့ ဆိုးလ်ရှားဟာ တိုက်စစ်ဖွင့်ဆော့ဖို့ ရည်ရွယ်လိုက်ရင်တော့ နံပါတ် ၆ ကစားသမား နေရာအတွက် ပေါ့ဂ်ဘာကို သုံးရမလား ဒါမှမဟုတ် ဗန်ဒီ ဘိခ်ကို သုံးမလား ခေါင်းစားသွားရပါလိမ့်မယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဗာတန်နဲ့ပွဲမှာ ဗန်ဒီ ဘိခ်ဟာ ဒီနေရာမှာကစားပြီး ​ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ ဆိုတာကလည်း တိုက်စစ်ဆင် ကစားတဲ့ ကစားကွက်မှာ ဘယ်လောက်အထိတောက်ပနိုင်သလဲ ဆိုတာ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အသင်းမှာ အမြဲ သက်သေ ပြထားခဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် အရေးကြီးတဲ့အဖွင့်ပွဲမှာ ဆိုးလ်ရှား ဘယ်သူ့ကို သုံးမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရပါတော့မယ် ။
(3) တိုက်စစ်မှူး ဘယ်သူလဲ ?
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး နေရာမှာ အန်သိုနီ မာရှယ်ဟာ ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြ သလို ခြေစွမ်း မပြနိုင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေဟာ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အပေါ် အားမလို အားမရ ဖြစ်နေခဲ့ကြပြီး ရောင်းထုတ်လိုက်ဖို့ထိ အသင်းကို တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာ မကြာခနပါပဲ ။
အခြားတဖက်မှာတော့ တိုက်စစ်မှူး အီဒင်ဆန် ကာဗာနီဟာ ဒီတစ်ပါတ်မှ အသင်းဆီကို ရောက်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူက အသင်းအတွက် ချက်ချင်း ပွဲထွက် ကစားပေးနိုင်မလားဆိုတာ မရေရာပါဘူး ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီပွဲမှာ မာရှယ်ပဲ ပွဲထွက်လာနိုင်ခြေ များနေပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ဆန်ချို ပါလာရင်တော့ ဆိုးလ်ရှားဟာ ဂရင်းဝုဒ်ကို အထောင်တိုက်စစ် နေရာမှာထားပြီး မာရှယ်ကို ယခင်က ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဘယ်တောင်ပံ တိုက်စစ် နေရာဆီ ပြန်ပို့ကောင်း ပို့နိုင်ပါသေးတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် လိဒ်စ် နဲ့ ပွဲမှာ မာရှယ်လား ? ကာဗာနီလား ? ဂရင်းဝုဒ်လား ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရပါတော့မယ် ။
(4) လင်ဒီလော့ဖ် or ဗာရန်း
ရီးယဲမက်ဒရစ် နောက်ခံလူ ရာဖေးလ် ဗာရန်းဟာ အချိန်မရွေး ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ ရောက်လာနိုင်ခြေ ရှိနေပါတယ် ။ ထွက်ပေါနေတဲ့ သတင်းတွေကတော့ သူဟာ အဖွင့်ပွဲ မတိုင်မီ ရောက်လာပြီး အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းသွားဖို့ ရှိနေပါတယ် ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကတော့ ဟယ်ရီ မက်ဂွားယားဟာ ရာသီကြို ပွဲစဥ် တစ်ပွဲမှ မကစားပဲ ယူနိုက်တက် အတွက် အဖွင့်ပွဲမှာ ပွဲထွက် ကစားပေးခွင့် ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အခုလည်း ဗာရန်းဟာ ဆိုးလ်ရှား လက်အောက်မှာ ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုး ရရှိသွားနိုင်ခြေ ရှိနေပါတယ် ။ လိဒ်စ် နဲ့ ပွဲစဥ်မှာ မက်ဂွားယားရဲ့ ပါတနာဟာ လင်ဒီလော့ဖ်လား ? ဗာရန်းလား ? စောင့်ကြည့်ရပါတော့မယ် ။
ဒါလော့ကို မြေတောင်မြှောက်ပေးတော့မဲ့ ယူနိုက်တက်
ယူနိုက်တက်က အကမင်းသားလေးကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်၀င်စားနေတဲ့…